ကျွန်မလဲအလှပြင်သည် ~ စန္ဒကူး
ခရီးသွားမှတ်တမ်း - ၂
ခရီးသွားမှတ်တမ်း - ၁
Valentine = :(
ကျွန်မကိုအများကအလှမပြင်ဘူးထင်တာ..အိမ်မှာဆိုမာမီကမပြင်မဆင်နေတယ်ဆူတယ်။ အပြင်ထွက်ခါနီးအထိခြံဝထိနောက်ကခေါင်းလိုက်ဖီးပေးသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပတ်ဝန်း
ကျင်ကသူတွေက အမနဲ့ညီမအမြဲယှဉ်တယ်။ညီမလေးကတော့ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နဲ့ချစ်စရာလေး ..အကြီးမမျက်နှာပြောင်နဲ့မပြင်မဆင်..စသည်ဖြင့်အမြဲပြောတယ်။
ဒါပေမယ့် mood အပေါ်မူတည်တယ်.. စိတ်ပါရင်ပေါ့.. စိတ်မပါတာက တစ်ပတ်မှာ ၄ရက်။ အရွယ်စရောက်ကတည်းကကျွန်မစွဲစွဲမြဲမြဲလိမ်းဖြစ်တာတော့ Nivea ဘဲ ကျွန်မနှင့် Nivea ဆိုပြီးတစ်ခါရေးဖူးသေးတယ်.. နောက်ပိုင်းအတွန့်လေးတွေထပ်ထပ်တပ်လာတာကတော့..
ကျွန်မရုံးမှာ OJT (on job training) လာဆင်းတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကကောင်မလေးက..မျက်လုံး
Liquid Liner ဆိုးတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တာနဲ့ရောဂါတက်ပြီး စင်ကာပူရောက်တော့ mustafa မှာလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ Quick Stroke ဆိုတာတွေ့လို့စမ်းကြည့်ဖို့ဝယ်ရင်းအခုထိအခြောက်လဲမြန်၊ လက်မငြိမ်လဲအဆင်တော်တော်ပြေတာမို့ အညို၊အမဲ၊အစိမ်း(၃)ရောင်အခုထိသုံးနေဆဲပါ။ မျက်နှာ အလှမပြင်အားရင်တောင်အဲဒါလေးဆိုးထားရင်ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်တာဘဲ။
အများအားဖြင့် nivea cream တစ်ခုလိမ်းလိုက်ပေမယ့်..အခုနောက်ပိုင်းတော့ နဲနဲလေး advance
ဖြစ်လာပါတယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့ဟာကိုတော့ (၂)ခုပုံသေထားပါတယ်။ Nivea နဲ့ Loreal ပါ။
Nivea က မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့နေ့တွေအတွက်သုံးပြီးတော့ loreal ကိုတော့ cream ဘဲလိမ်းထား
ပြီးရင်တော့ nivea cream ကိုလိမ်းပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းအသစ်ထွက်တာလေးက sparkling
white.. အဲဒါလေးလဲကောင်းတယ်။ day/night/foam ၃မျိုးတွဲသုံးတယ်။ roll-on လဲသူပါဘဲ။
cream လိမ်းပြီးရင်တော့ မိတ်ကပ်အရည်လိမ်းပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဆိုမကြိုက်တတ်ပေမယ့် ဒီတစ်မျိုး
ဒါပြီးရင်တော့ပါးနီ..နဲနဲပါးပါး.. revlon powder blush (Smoky rose) ...
အမြဲမဟုတ်ပေမယ့်စိတ်ပေါက်ရင်ဝတ်တဲ့အရောင်နဲ့လိုက်အောင် revlon eye shadow Color Stay..
အဆုံးသတ်မှာတော့.. Careline powder နဲ့ Jillian Dempsey for AVON Professional Mascara
အဲဒီ mascara ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်. မြန်မြန်ခြောက်ပီး ပန်ဒါမျက်လုံးလိုမဖြစ်လို့..
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လို့အပြင်ထွက်ခါနီးမှာတော့ Body Shop က white musk ကိုလက်မှာနဲနဲ
လိမ်းပါတယ်။ အနံ့လေးကိုအရမ်းကြိုက်လို့ပါ။ အသားတော့ဖြူမလာမှာကျိန်းသေပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့ခရင်မ်ကိုတော့ Enchanteur Charming/Lux နှစ်မျိုးသုံးပါတယ်။ မနက်နဲ့ည..ပြောင်း
သုံးပါတယ်။ Lux ဆိုရင်အပန်းရောင်အနံ့လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးရေချိုးရင်အနံ့
လေးစွဲကျန်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သဘောကျမဆုံး..office မှာလဲ Enchanteur lotion တစ်ဗူးထား
အိတ်ထဲအမြဲဆောင်ဖြစ်တာတော့ Nivea hand lotionပါ.. ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မနဲ့တည့်တဲ့အနံ့တွေကိုသာရှာသုံးရတာမို့ဒါဘဲသုံးဖြစ်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းရေချိုးပြီးရင်တော့ သံလွင်ဆီလိမ်းပြီးအိပ်ပါတယ်။ ဆီပေမယ့်စီးကပ်ကပ်မနေပါဘူး.
အုန်းဆီ နဲ့ သံလွင်ဆီ ကိုတစ်ရက်ဆီလိမ်းပါတယ်။ မျက်နှာကိုတော့ Clinque mosturizer လိမ်း..
ရုံးမသွားတဲ့နေ့တွေနဲ့..အနီးနားသာသွားစရာရှိတဲ့နေ့တွေမှာတော့ သံလွင်ဆီရယ် Mosturizer ရယ်ဆိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အုန်းဆီကရိုးရိုးဆီတော့မဟုတ်.. virgin coconut oil ပါ.. ချောင်းဆိုးရင်လဲရေနွေးထဲတစ်ဇွန်းထည့်
သံပုရာညှစ်သောက်၊ ချက်ချင်းနီးပါးပျောက်ပါတယ်။ အိပ်နေရင်ခုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ ညိုမဲစွဲရင်
ကဲဒီလောက်နဲ့ရပ်ပါအုံးမယ်။နောက်အပတ်တော့ oral defense ရှိလို့ဘလော့ပေါ်ကခဏပျောက်ပါမယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 11:09 AM
တို့ လဲ Liquid Liner တော့အရမ်းသုံးဖြစ်တယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာလေ. မိတ်ကပ် မျက်နှာလေးကြည့်ချင်ပါတယ်။
မိတ်ကပ် မျက်နှာလေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ :)
မိတ်ကပ်လိမ်းလဲထူးမယ်မထင်။ ဒီရုပ်ပဲနေမှာပဲ။ ပိုတော့ချောလာမှာမဟုတ်။
တကယ်လှမှာပါ။ ယုံတယ် . ပိုစ်လေးကောင်းတယ။် presentation လည်းကြိုက်တယ။်